प्रतिष्पर्धीका कुरा यस्ता छन् | अन्तरवार्ता | साझामन्च
प्रतिष्पर्धीका कुरा यस्ता छन्
प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , २ 21:15:23
काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको यही फागुन ५ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका लोकतान्त्रिक प्यानल र बाम गठबन्धनका अध्यक्ष पदका प्रतिष्पर्धीका कुरा यस्ता छन् । कसले बाजी मार्ला ? कसको नाममा तपाईंको मत जाहेर गर्ने । पढौं र योग्यलाई छानौं ।
‘मेनलाइन पाइपबाट १० किलोमिटर क्षेत्रसम्म पानीको धारा विस्तार गर्नेछु’
ज्ञानेन्द्र घिमिरे : बाम गठबन्धन
तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
म संस्थाको वर्तमान सचिव । पहिला पनि उपाध्यक्ष भइसकेको छु । संस्थामा बसेर काम गरिरहेको अवस्था हो । हामीले दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना ल्याउँदै गर्दा यो छोटो समयमा सबै काम पूरा नभएकोले पनि त्यो काम पूरा गर्न मेरो नेतृत्व जरुरी छ । हामीले अझै आधारभूत वर्गसम्म पानी पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ । अहिलेपनि कालो पानी आइरहेको छ । एयर ट्याङक हाम्रो उत्पादन क्षमताभन्दा कम भएकोले सम्बन्धित निकायमा यसको पहल गरेका छौँ । त्यसलाई पूरा गर्नुछ । कोही पनि नागरिकले पानीबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले घरघरमा धारा पुर्याउने र सामुदायिक धारा जडानको काम पूरा गर्ने आसयले मेरो उम्मेदवारी परेको हो ।
विजयी बन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हाम्रो कार्यकालमा हामीले दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना ल्याएर काम गरेको आमउपभोक्ता वर्गलाई थाहा छ । २०६९ सालमा आयोजनासँगै सम्झौता गर्नु अघि ११ सय घरधुरीलाई ३० लाख लिटर पानी दैनिक चाहिन्थ्यो । १८ लाख लिटर पानी मात्र दैनिक उत्पादन थियो । अहिले त्यो पूरा भएको छ । त्यसबेला म उपाध्यक्ष थिए । अहिले ६ वर्ष भइसकेको छ यही संस्थामा काम गरेको ।
लामो समयदेखि संस्थामा बसेर काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि उपभोक्ता मित्रहरुले भरोसा दिलाएकाले पनि म विश्वस्त छु । त्यसकारण पनि उपभोक्ताहरुले मलाई विश्वास गर्नु भएको छ, त्यो मतपत्रमा पनि देखिनेछ भन्नेमा आशावादी छु ।
विजयी बन्ने आधारहरु के कस्ता छन् नि ?
आयोजना ल्याएपछि ८ हजार घरधुरीलाई पुग्ने ९० लाख लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न सकिन्छ । हाल ५ हजार ४३ घरधुरीलाई पुग्ने ४० लाख लिटर दैनिक पानी वितरण गरिँदै आएको छ । गर्मीमा दैनिक ३६ देखि ३८ लाख तथा जाडोमा ३० लाख लिटर पानी २४ सै घण्टा खपत भइरहेको छ । आयोजना आउनु अघिको पानीको नाजुक अवस्था र पानीमा लोडसेडिङजस्ता समस्या पार लगाएका छौँ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका साढे सात हजार रुपैयाँभन्दा कम मासिक आय हुनेलाई अनुदान (ओबिए) अन्तर्गत एडिबीको सहयोगमा १ हजार १० घरधुरीलाई शौचालय बनाइदिएका छौँ । ५२८ जना गरिबलाई न्यून दर रेटमा धारा जडान गरेका छौँ । सरकारले तोके बमोजिमको गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराइरहेका छौँ । यस्ता थुप्रै आधारले गर्दा जित्छु भन्ने लागेको छ ।
मान्नुस्, जित्नु भयो, कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजना के छन् ?
साविक मेचीनगर ५, ६, ७, ८ र बाहुनडाँगी ३ का केही उपभोक्तालाई २४ सै घण्टा प्रशोधित पानी उपलब्ध गराउँछौँ । खानेपानीको व्यवस्थापनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने, पानी सुरक्षा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने, नगर विकास कोषको करिब १४ करोड रुपैयाँको ऋण १५ वर्षसम्म ५ प्रतिशतले वार्षिक तिर्नु पर्नेछ । त्यसलाई समयमा चुक्ता गरिनेछ । पानी परीक्षण ल्याब, कर्मचारीलाई विश्वसनीय बनाइने छ ।
रसायनिक, जैविक र भौतिक परीक्षण गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई सहुलियतमा पानी उपलब्ध गराउने, पानीको धारा जडानमा वर्गीकरण गरिनेछ । खानेपानीलाई लिइने विद्युत महशुल कृषि सरह गर्न मन्त्रालयमा पहल गर्नेछौँ । आधारभूत वर्गसम्म शुद्ध खानेपानी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । चारवटा ट्याङकीबाट दैनिक ५ लाख लिटर पानी वास आउटका नाममा फ्याकिरहेका छौँ । बोरिङबाट फिल्टरलाई सफा गर्दा उक्त परिमाणको पानी फ्याक्नु परिरहेको छ । फ्याँकेको पानीलाई सदुपयोग गरी खेर गएको पानीलाई जोहो गर्न सकिने प्रविधि ल्याउने छौँ । पाइप लाइन विस्तार गरेर मुहानदेखि मुखसम्म पानी पुर्याउने योजना छ ।
मेचीनगरको मेनलाइन पाइपबाट १० किलोमिटर क्षेत्रसम्म पानीको धारा विस्तार गर्नेछौँ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन आयोजना अब निकट भविष्यमा शुरु हुनेछ । साढे ६ करोडको लागतमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । हरेक ट्याङकीबाट पानी बोरिङ गरी कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्नका लागि पनि मेरो नेतृत्वको टीमको आवश्यकता छ ।
खानेपानी संस्थामा नेतृत्वका लागि दलीय भिडन्त कत्तिको उचित हो ?
यसलाई दलीय भिडन्त भन्न मिल्दैन । खानेपानी जीवनसँग सम्बन्धित पाटो हो । संस्थालाई सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नेतृत्व मिलाएर लाने वार्तालाप भएका हुन् । तर, वार्ता फलदायी भएन । खानेपानीमा जसले पहिलेदेखि समस्या झेल्यो, दुःख गर्यो ती व्यक्ति दलभित्रैका भएको कारण त्यस्तो देखिएको हो । दलीय भिडन्त विल्कुल होइन । अहिले देख्दा खानेपानीमा दलीय भिडन्तजस्तो देखिएको मात्र हो ।
अतिरिक्त सेवा शुल्कको कुरा के हो ?
खानेपानी संस्थालाई अनलाइन प्रणालीमा लानुपर्ने भएकाले त्यो अतिरिक्त शुल्क लगाइएको हो । तर, उपभोक्ताहरुलाई धेरै भार पर्ने भएकाले हाम्रो नेतुत्वको टीमले आगामी कार्यकालमा उक्त सेवाशुल्क हटाउने योजना बनाएका छौँ । केन्द्रकै नीति अनुसार सफ्टवेयर व्यवस्थित गर्न, उपभोक्ता मैत्री लगायतका काम गर्न अनलाइनमा जानुपर्ने भएकोले त्यसतो सेवा शुल्क लगाइएको थियो ।
अन्त्यमा संस्थाका उपभोक्तालाई केही सन्देश छ ?
मेरो कामको मूल्याङ्कन उपभोक्ताले गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो टीमलाई अत्याधिक मत दिँदै जिताउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । दुई कार्यकाल उपभोक्ताको हितका लागि रात दिन नभनी खटेको छु । अध्यक्ष पदमा यहाँहरुले विश्वास गरेर मत दिएर जिताउनु हुन्छ भन्ने आशा छ । आलोचना नहुने गरी उपभोक्ताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नेछु भन्ने वचनबद्धता जाहेर गर्दछु ।
‘सामाजिक संस्थामा भएका बेथितिहरु हटाउनु पर्छ’
हर्क फ्याक लिम्बूः लोकतान्त्रिक प्यानल
काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको म उपभोक्ता मात्र हुँ । खानेपानी मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । संस्थाले उपभोक्तालाई शुद्ध पिउने पानी दिनु कर्तव्य हो । सामाजिक सेवामा लागिरहेकोले मलाई पार्टी (काँग्रेस)ले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएर पठाएको छ । मलाई दिइएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
नेपाली काँग्रेस मेचीनगर समितिले विश्वासका साथ मलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । मैले यहाँका उपभोक्ता र पार्टीको जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेपछि जीत सुनिश्चत जस्तै छ भन्ने लाग्छ । उपभोक्ता मित्रहरुले विश्वास दिलाउनु भएकाले पनि मलाई शतप्रतिशत जित्छु भन्ने आशा छ ।
संस्थामा रहे पनि नरहे पनि असम्भव कुरा म कहिले गर्दिन र पूरा गर्न सक्ने कुरा मात्र गर्छु । पहिलो चोटी खानेपानी संस्थामा जाँदैछु । त्यहाँभित्र के छ वास्तविक कुरा बुझेपछि उपभोक्ता र संस्थाको हितमा निस्वार्थ रुपमा अघि बढ्नेछु । भष्ट्राचार भन्ने कुरा जीवनमा कहिले पनि गर्नु नपरोस् । पारदर्शी ढंगले लाग्ने प्रण गर्दछु । सबै वडामा धारा पुर्याउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पहल गरेर नगरबासीको हितमा काम गर्ने लक्ष्य भएकाले यही नै विजयी बन्नका लागि चाहिने आधारहरु हुन् ।
अहिले जति घरमा धारा जडान गरिएको छ, त्यसलाई अझ बढाएर संस्थाको पहुँच क्षेत्रका घरघरमा खानेपानीको पाइप विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय सेवा, मासिकरुपमा खानेपानीको परीक्षण गरी शुद्ध पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु । आर्थिकरुपमा विपन्न ग्राहकलाई सहुलियतमा धारा जडान गर्ने अवसर दिइने छ भने अपाङ्ग, एकल, महिला, लोपोन्मुख समुदायलाई जडान शुल्कमा छुट दिइनेछ ।
पानीको माग अनुसार क्षमतामा बृद्धि गर्ने, समबन्धित निकायसँग कुरा गरेर डिप बोरिङ विस्तार गर्ने, कालोपानीको समस्या समाधान गर्न काहाँबाट त्यस्तो भएको हो पहिचान गर्ने, विश्व बैंकको ऋणको व्याज दर घटाउने, संस्थाको फजुल खर्च न्यूनीकरण र पारदर्शीता अपनाउने छौँ । ग्रामीण इलाकामा थप धारा विस्तार गर्ने, संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने र चुुस्त कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था मिलाउने छु ।
खानेपानी संस्था एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हुनुपर्ने हो । उम्मेदवारीको टिकट लिन सबै संघ–संस्थामा राजनीतिक दलको निर्णय लिने परिपाटी छ । चुनावका बेला ग्राहक वा उपभोक्ताको घरमा जाँदा यो दल वा त्यो दल भनेर भोट माग्दैनौँ । सामाजिक सेवाका लागि जसले राम्रो काम गर्छ उसले भोट पाउने हो । सामाजिक संस्थामा भएका बेथितिहरु हटाउनु पर्छ तब मात्र खानेपानी, खानेपानी संस्था जस्तो रहन्छ । खानेपानी संस्थामा राजनीति गर्न जाने होइन, पार्टीले पठायो । तर, त्यहाँ त उपभोक्तालाई कसरी शुद्ध पानी दिन सकिन्छ त्यसलाई ध्यान दिने हो । त्यसैले त्यो दलीय भिडन्त होइन ।
मैले पनि सुनेको छु । यथार्थ कुरा के हो बुझेको छैन । सत्यतथ्य कुरा के हो बुझ्छु । यदि उपभोक्तालाई अनावश्यक भार बोकाएको रहेछ भने त्यो छुट गराउने वा हटाउने मेरो तर्फबाट पहल हुनेछ ।
आगामी फागुन ५ गते हुने खानेपानी उपभोक्ता समितिको चुनावमा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार छु । मलगायत मेरो टिमलाई आम उपभोक्ता महानुभावहरुलाई पहिलो चोटी एकपल्ट संस्था र तपाईंहरुको सेवा गर्ने मौका दिनु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आशा र भरोसा गरेको छु ।
प्रस्तुतिः अर्जुन कार्की
‘नगर उपप्रमुख सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं’
‘नेपालीहरुको लिभिङ स्टाण्डर्ड बढेकाले नै कार बिक्री बढिरहेको हो’
'सहकारी ऐन २०७४ पनि अझै पूर्ण छैन' : लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती
‘सामुदायिक वनलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन’
बिर्तामोडको फोहोरबाट अब मोहर बनाइनेः उपप्रमुख प्रसाईं (अडियोसहित)
संविधानको भावनाअनुसार नै ३३ प्रतिशत महिला सरकारमा हुनुपर्छ- पवित्रा निरौला
सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्ने परम्परालाई अब हामी तोड्नेछौंः गोपालचन्द्र बुढाथोकी
मेरो कोही प्रतिस्पर्धी छैनन् : श्रीप्रसाद मैनाली